Madaxweynaha la doortay ee Puntland oo kormeeray wasaaradda Maaliyadda - Halbeeg News
GAROOWE(HALBEEG)-Madaxweynaha Puntland, mudane Saciid Cabdulahi Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Garoowe.
Kulan uu madaxweynuhu la yeeshay saraakiisha wasaaradda maaliyadda ayay uga wadahadleen arrimo dhowr ah oo khuseeya wasaaradda maaliyadda, gaar ahaan ilaalinta kharashka ku baxaya maamulka xilliga kala guurka ah.
Madaxweynaha ayaa wasaaradda kula dardaarmay in ay muujiyaan dadaal iyo wadashaqeyn sidoo kalena wuxuu madaxweynuha u dardaarmay in ay xilweyn iska saaraan ilaalinta hantida dadweynaha ee ay gacanta ku hayaan lagulana xisaabtami doono.
Madaxweyne Deni ayaa markii dhawaan la doortay waxa uu soo saaray wareegto uu ku hakinayo in wasaaradda maaliyadda, bankiyada iyo xawaaladaha gaarka loo leeyahayba ay joojiyaan kharashaadka ay ka bixinayaan koontooyinka maamulka Puntland.
Dhanka kale wararka inaga soo gaaraya magaalada Garoowe ayaa sheegaya in la filayo in madaxweynaha cusub uu si rasmi ah ulawareegi doono xilkiisa maalinta Isniinta ah ee ina soo aaddan, taasoo ay xigi doonto in uu soo dhiso golaha cusub ee xukuumaddiisa.
Tiro al-Shabaab ah oo lagu laayay Shabeellaha Hoose - guddoomiyaha gobolka